Ɔsom Ho Asɛmpa Bɛn na Ɛwɔ Hɔ? | Asɛmpa
1. So ɔsom nyinaa ye?
Nnipa papa wɔ ɔsom biara mu. Anigyesɛm ne sɛ Onyankopɔn hu nnipa a wɔte saa no, na odwen wɔn ho. Nanso, awerɛhosɛm ne sɛ, wɔadi bɔne akɛse wɔ nyamesom din mu. (2 Korintofo 4:3, 4; 11:13-15) Sɛnea amanneɛbɔ kyerɛ no, ɔsom ahorow bi mpo de wɔn ho hyehyɛ amammɔesɛm mu, wɔtɔre mmusua ase, wodi ako, na wɔyɛ mmofra ayayade de nna ho nsɛm teetee wɔn. Hwɛ sɛnea eyi hyɛ nnipa komapafo a wɔwɔ Onyankopɔn mu gyidi no awerɛhow!​—Kenkan Mateo 24:3-5, 11, 12.
Bere a nokware som hyɛ Onyankopɔn anuonyam no, atoro som de, ɛma ne werɛ how. Ɛkyerɛkyerɛ nsɛm a enni Bible mu a ebi ne nkyerɛkyerɛ a ɛfa Onyankopɔn ne awufo ho a ɛnyɛ nokware. Nanso, Yehowa pɛ sɛ nnipa hu ne ho nsɛm a ɛyɛ nokware.​—Kenkan Hesekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.
2. Ɔsom ho asɛmpa bɛn na ɛwɔ hɔ?
Nea ɛyɛ anigye ne sɛ, ɔsom ahorow a wɔkyerɛ sɛ wɔdɔ Onyankopɔn nanso nokwasɛm ne sɛ wɔdɔ Satan wiase no ntumi nnaadaa no. (Yakobo 4:4) Onyankopɔn Asɛm no frɛ atoro som nyinaa “Babilon Kɛse.” Babilon yɛ kurow a ɛhɔ na atoro som fii ase wɔ Noa Nsuyiri no akyi. Ɛrenkyɛ, Onyankopɔn bɛsɛe ɔsom a ɛdaadaa adesamma na ɛde nhyɛso ba wɔn so no prɛko pɛ.​—Kenkan Adiyisɛm 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.
Nsɛm pa foforo pii wɔ hɔ. Yehowa werɛ mfii nnipa komapafo a wɔhyehyɛ atoro som mu wɔ wiase nyinaa no. Ɔrekyerɛkyerɛ nnipa a wɔte saa no nokware no ma wɔayɛ biako.​—Kenkan Mika 4:2, 5.
3. Dɛn na ɛsɛ sɛ nnipa a wɔwɔ koma pa no yɛ?
Nokware som reka nnipa abom ma wɔayɛ biako
Yehowa dwen nnipa a wɔdɔ nokware no na wɔn ani gye nneɛma papa ho no ho. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ womfi atoro som mu. Nnipa a wɔdɔ Onyankopɔn fi wɔn pɛ mu yɛ nsakrae sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛsɔ n’ani.​—Kenkan Adiyisɛm 18:4.
Wɔ asomafo no bere so no, bere a nnipa komapafo tee asɛmpa a na asomafo no reka no, wɔde anigye gyei. Yehowa asɛm a wotiei no ma wɔsesaa wɔn abrabɔ, na wobenyaa anigye wɔ wɔn asetena mu, na wɔn asetena bɛyɛɛ nea mfaso wɔ so na anidaso wom. Nea wɔyɛe no yɛ nhwɛso pa ma yɛn a yɛwɔ hɔ nnɛ efisɛ wɔde Yehowa dii kan wɔ wɔn asetenam de kyerɛe sɛ wɔatie asɛmpa no.​—Kenkan 1 Tesalonikafo 1:8, 9; 2:13.
Yehowa gye wɔn a wɔtwe wɔn ho fi atoro som mu ba n’abusua a emufo som no no mu. Yehowa de anigye reto nsa afrɛ wo, na sɛ wugye so a, wobɛba abɛyɛ n’adamfo, wubenya abusua foforo a emufo dodɔ wɔn ho na wɔresom Yehowa, na wubenya daa nkwa.​—Kenkan Marko 10:29, 30; 2 Korintofo 6:17, 18.
4. Dɛn na Onyankopɔn bɛyɛ na ama aman nyinaa ani agye?
Atemmu a ɛreba atoro som so no yɛ asɛmpa. Ɛbɛma nnipa a wɔwɔ wiase nyinaa ade wɔn ho afi nhyɛso ase. Atoro som rennaadaa adesamma na ɛrempaapae wɔn mu bio da. Wɔn a wɔte ase nyinaa bɛbom de biakoyɛ asom nokware Nyankopɔn koro no.​—Kenkan Adiyisɛm 18:20, 21; 21:3, 4.
Share Share Ɔsom Ho Asɛmpa Bɛn na Ɛwɔ Hɔ?